Afhayeen cusub oo loo magacaabay maamulka gobolka Banaadir – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Afhayeen cusub oo loo magacaabay maamulka gobolka Banaadir
5th May 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho – Mareeg.com: Afhayeen cusub ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir Xasan Muungaab u magacaabay maamulka gobolka Banaadir, kadib markii uu is casilay afhayeenkii dhawaan xilkaas loo magacaabay Cabdi Baasid Maxamed C/raxmaan oo xilkaas hayey wax ka yar labo bilood.
Axmed Cusmaan Muxiyadiin (Showqi) ayaa Jen. Muungaab u kmagacaabay inuu noqdo afhayeenka cusub ee maamulka gobolka Banaadir, kaasoo ah nin dhalinyaro oo ku soo waxbartay dalka debadiisa.
Afhayeenkii hore ee gobolka Banaadir Cabdi Baasid Maxamed C/raxmaan oo shalay shir saxaafadeed ku qabtay Muqdisho ayaa hadlay isagoo u muuqaday nin ka shallaayey xilka uu qabtay.
Wuxuu sheegay Cabdi Baasid in lagu soo fara geliyay howlihiisa, taasna ay keentay inuu is casilo, wuxuuna tilmaamay inuusan xilkaan qaban laheyn hadduu ogyahay sida xaalku noqon doono.
Sababta uu isu casilay Cabdi Baasid ayaa lagu sheegay iney aheyd cadaadis uga yimid beesha uu ka dhashay, kuwaasoo dowladda jirta u diiday iney aqoonsiga degmada Kaxda, taasoo uu degmo ahaan u aqoonsaday madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed.
Cabdi Baasid ka hor waxaa afhayeenka maamulka gobolka Banaadir ahaa Maxamed Yusuf Cusmaan, kaasoo uu xilka ka qaaday Jen. Muungaab markii uu bilaabay xilal ka qaadista xubnihii maamulka gobolka iyo degmooyinka Banaadir.
Soomaaliya iyo Qaramada Midoobay oo Muqdisho uga wada hadlay arrimaha nabadeynta
Gudoomiyihii degmada Yaakhshiid Muxudiin Jurrus oo xilka laga qaaday